Masayendisiti Anogona Kuwana Nzira Yekupinza Oxygen Muropa Mutsinga – Chimurenga News
Masayendisiti Anogona Kuwana Nzira Yekupinza Oxygen Muropa Mutsinga
Kune zvirwere zvakawanda nekukuvara, kusanganisira COVID-19 , uko muviri unonetsekana kuti utore huwandu hweokisijeni mumapapu anodiwa kuti urarame.
Muzviitiko zvakanyanya, varwere vanoiswa pamhepo inofefetera, asi michina iyi inowanzoshomeka uye inogona kukonzera matambudziko avo, kusanganisira kutapukirwa nekukuvara kumapapu.
Masayendisiti anogona kunge awana budiriro, uye ndiyo imwe inogona kukanganisa zvakanyanya mashandisirwo emagetsi.
Pamusoro pekufefetedza kwemhepo, kune imwe nzira inonzi Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), apo ropa rinotakurwa kunze kwemuviri kuitira kuti oxygen iwedzere uye carbon dioxide ibviswe.
Nekuda kwechitsva chawanwa, oxygen ingave yava kukwanisa kuwedzerwa zvakananga, uye ropa remurwere rinogona kugara pariri. Nemamiriro akaita serefractory hypoxemia , iyo inogona kuunzwa nekuve pamhepo inofefetera, kuve neiyi nzira iripo kunogona kuponesa hupenyu.
“Kana ikabudirira, tekinoroji yakatsanangurwa inogona kubatsira kudzivirira kana kuderedza chiitiko chekukuvara kwemapapu ane chekuita nemhepo kubva kune refractory hypoxemia,” vanotsvaga vanonyora mubepa ravo idzva .
Nzira itsva iyi inoshanda nekuisa mvura-inoremerwa neokisijeni kuburikidza nenhevedzano yemhuno inova diki nediki. Nenguva iyo nzira yapera, mabhubhu madiki pane masero matsvuku eropa – uye zvinoreva kuti anogona kubaiwa akananga muropa pasina kuvhara tsinga dzeropa.
A lipid membrane inoshandiswa kupfekedza mabubbles asati awedzerwa muropa, izvo zvinodzivirira huturu uye kumisa mabubbles kuti asabatana. Mushure mokunge mhinduro yacho yaiswa jekiseni, membrane inonyungudika uye okisijeni inosunungurwa.
Mukuedza kweropa revanhu rakapihwa, mwero weokisijeni muropa unogona kusimudzwa kubva pa15 muzana kuenda pamusoro pe95 muzana mukati memaminitsi mashoma. Mumakonzo mhenyu, maitiro akaratidzwa kuwedzera saturation kubva pa20 muzana kusvika 50 muzana.
“Zvakakosha, zvishandiso izvi zvinotibvumira kudzora kuyerwa kweokisijeni inounzwa uye huwandu hwemvura inopihwa, ese ari maviri akakosha paramita mukutarisira varwere vanorwara zvakanyanya,” vanotsvaga vanonyora .
Vatsvagiri vanoshuvira kusimbisa kuti ichi “chiratidzo chepfungwa” parizvino uye haisati yaedzwa pavanhu. Nekudaro, ivo vanoita kunge vakawana fomula inogona kuita inoshanda nehukuru hwemabhubhu uye coating inoshandiswa.
Kupinza okisijeni mumuviri seizvi ibasa rakaoma rekuenzanisa, nekuti matambudziko anogona kukurumidza kuitika kana yakawandisa kana kushoma yakawedzerwa, kana yakawedzerwa nenzira isiri iyo. Vatsvagiri izvozvi vanoda kuyedza tekinoroji yavo pamhuka hombe vasati vaenda kumiedzo yevanhu.
Kunyange isingakwanise kutsiva maventilator zvachose kana ECMO tsigiro yehupenyu muchimiro chayo chazvino, zvinotarisirwa kuti mudziyo mutsva unogona kugadzirira zvirinani muviri kuti uiswe pamichina iyi, kana kuti mapapu aenderere mberi kudzamara mhepo inofefetera yave kuwanikwa.
“Zvakakosha kuti titaure kuti mudziyo wedu unogona kubatanidzwa mune maventilator aripo, zvichibvumira kubatanidzwa kusina musono mumabasa ekiriniki aripo,” vanonyora vakanyora .
Tsvagiridzo yakaburitswa muPNAS .
Previous Violence, Corruption Gripping Vending Sector in Zimbabwe : Survey
Next Former South African Intelligence Chief lays criminal charges against President Cyril Ramaphosa